I-China China Ukulima Umbane weetrektara 30hp 35hp 40hp 45hp 50hp 55hp 60hp Zhicheng
354Wheel itrektara technical iparameters
chwetheza 4 × 4 isondo
ubungakanani ubude (mm) 3020
ubude (mm) 1780
Nyathela ivili langaphambili (mm) 1025,1225
ivili langasemva (mm) 1000-1300 uhlengahlengiso
asi (mm) 1730
Ukucoca Min.Ground (mm) 290
ubunzima besakhiwo (kg) 1300
chwetheza emgceni wamanzi apholileyo ukubetha oku-4 isilinda
amandla ulinganiselwe (kW) 25.8
isantya sezinga (r / min) 2350
Uhlobo lwamafutha idizili
Ukudinwa ivili langaphambili 6.00-16
ivili langasemva 9.50-24
uhlobo steering i-cycloid rotary valve, egcwele uhlobo lwe-hydraulic type
uhlobo lotshintsho I-8F + 2R
Uhlobo lokumiswa 1 ngasemva ibekwe kwindawo yamakhonkco ama-3
1) Isakhiwo esilula kuhlobo lomgama, kulula ukufakwa kunye nokugcinwa.
2) Ukwamkela izixhobo zodumo oludumileyo lwehlabathi kumalungu womoya, amalungu ombane kunye nokusebenza kwamalungu.
3) Ukwamkela ngaphambili kunye nasemva kokulwa nobunzima ukuze uzalisekise umsebenzi onzima wasefama.
4) Ngobunewunewu bokubuyisa iirobhothi ngombono ongcono kunye nomsebenzi;
5) Faka isicelo sekhomputha yomoya ukuze uqhagamshele kunye ne-trailer yomoya erhuqwayo yangasemva.
1. Bekuveliswa iitrektara ngaphezulu kweminyaka eli-10 e-China, sinobuchwephesha obuninzi kwitrektara kwaye sithumele e-Canada, Greece, Kenya, Pakistan, Costa Rica… njl. Iitrektara zethu ezisemgangathweni othembekileyo bezisoloko zixatyiswa ngabathengi, ke sifumene iqela elikhulu labathengi abathemba itrektara yethu nathi.
2. Singasoloko sinika abathengi bethu abathandekayo iitrektara ngexabiso elihle, kuba asizomvelisi kuphela kodwa sinika abathengi ixabiso elithengisa yonke into, nokuba sisampulu yomyalelo omnye. Okukhona u-odola, ixabiso elingabizi kakhulu.
3. Izixhobo ezininzi kunye neetrektara zinokuhlangabezana neemfuno ezahlukeneyo zabathengi. Sinobuchule bokubonelela ngazo zonke iintlobo zezincedisi zokuncamathelisa itrektara, ukuze sikwazi ukunceda ngakumbi ngomsebenzi wakho wefama.
4. Ixesha lokuhambisa ngokukhawuleza, liya kuba lula ngakumbi kwi-purachsing yakho.
5. Yiba nomatshini kwisitokhwe kunye nexesha lokuhambisa ngokukhawuleza, kuya kuba lula ngakumbi ukwenza ipurachsing yakho.
Egqithileyo Ukubonelela ngeFektri encinci yeFama yeTrektara Ixabiso
Okulandelayo: 4 × 4 Ezolimo Idizili Mini itrektara 4wd NgeCabin / ngeLanga umthunzi
35 Hp Mini itektala
Itrekta ye-Hp engama-35
35hp Mini itrektara Nge Ndlwana
Itrekta yeHp Mini eyi-40
Itrekta ye-40 Hp
Itektala encinci ye-Hp ye-45
Itrekta ye-Hp engama-45
50 Hp Mini itektala
Itrekta ye-50 Hp
Itektala encinci ye-55 Hp
Itrekta ye-55 ye-Hp
Itektala encinci ye-60 Hp
Itrekta ye-60 Hp
Uvimba 35 Hp
Uvimba 40 Hp
Uvimba 45 Hp
Uvimba 50 Hp
Uvimba 55 Hp
Uvimba 60 Hp